अमेरिकाले कहिले सार्वजनिक गर्दैछ कोरोनाको भ्याक्सिन ? – Jagaran Nepal
अमेरिकाले कहिले सार्वजनिक गर्दैछ कोरोनाको भ्याक्सिन ?
काठमाडौँ । चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ बिरुद्ध सिंगो विश्व जुधीरहदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चाँडै नै कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध हुने दाबी गरेका छन्। एरिजोनामा आयोजना भएको एक चुनावी सभाको क्रममा विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले कोरोना भाइरस महामारीमा आफ्नो सरकारको कामको सूची सार्वजनिक गरेका छन्।
ट्रम्पले भने, ‘हामीले चाँडै नै भ्याक्सिन पाउँदैछौं । हामीले अमेरिकी सेनालाई त्यो शक्ति दिएका छौं।’ ट्रम्पले मानिसहरुलाई यो रोगबाट बचाउनका लागि भेन्टिलेटरको कमी हुन नदिएको पनि जानकारी दिएका छन्। सरकारले न्यूयोर्कसम्म अस्पताल बनाइदिए पनि ती प्रयोगमा नआएको पनि ट्रम्पको दाबी छ।
ट्रम्पले अमेरिकी अर्थव्यवस्थालाई समस्याबाट बचाउनका लागि तीन अर्ब डलरको कोषका लागि विधेयक पास गरेको पनि जानकारी दिए । कोरोना भाइरसको सबैभन्दा बढी प्रभाव अमेरिकामा परेको छ।
यस्तै कोरोना भाइरसका कारण विश्भवर ९३ लाखभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । विश्वभर ९३ लाख ६० हजार ६ सय ४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४ लाख ७९ हजार ७ सय ७७ पुगेको छ ।
विश्वका २१५ वटा राष्ट्रमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमितमध्ये ५० लाख ४१ हजार १ सय ३७ जना कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन् । विश्वमा कोरोना भाइरसका ३८ लाख ३१ हजार ७ सय ३१ जना कोरोना भाइरससँगको लडाइँ लडिरहेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र २४ लाख २४ हजार १ सय ६८ जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको छ भने १ लाख २३ हजार ४ सय २३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण युरोपेली मुलुकमा २३ लाख ४२ हजार २ सय ७१ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् भने पछिल्लो २४ घण्टामा १३ हजार ७ सय २४ जना थपिएका छन् । यस्तै उत्तर अमेरिकी मुलुकहरुमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको सङ्ख्या २८ लाख १९ हजार ९ सय ३१ पुगेको छ ।
विश्वमा कोरोना संक्रमित संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबैभन्दा बढी (२४ लाख २४ हजार १ सय ६८) जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । छिमेकी मुलुक भारत बढी कोरोना संक्रमित राष्ट्रमध्ये चौथो नम्बरमा छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल र रसियापछि भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढी देखिएको छ ।
पछिल्लो अपडेट अनुसार ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको सङ्ख्या ११ लाख ५१ हजार ४ सय ७९ पुगेको छ भने रसियामा ५ लाख ९९ हजार ७ सय ५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । भारतमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या ४ लाख ४० हजार २ सय १५ पुगेको छ । १४ हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको सङ्ख्या १० हजार ९९ पुगेको छ भने २४ जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । यीमध्ये २ हजार २ सय २४ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्